Shir Caalami ah oo uu ka qayb galayo madaxwayne Farmaajo oo ka furmaya dalka Masar | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Shir Caalami ah oo uu ka qayb galayo madaxwayne Farmaajo oo ka...
Shir Caalami ah oo uu ka qayb galayo madaxwayne Farmaajo oo ka furmaya dalka Masar
Saacadaha soo socda oo Maanta ah ayaa la filayaa in Magalada Sharma El-Sheikh ee dalka Masar in uu ka furmo shir Shir Madaxeedka dalalka Carabta iyo Midowga Yurub oo ah kii ugu horeeyay oo ay dalkaasi ku yeeshaan.
Shirkaas ayaa waxaa Soomaaliya uga qeyb galaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo,waxana sidoo kale ka qeyb galaya 22 dal oo ka socda Wadamada Carabta 28 ka mid ah Midowga Yurub oo uu Ingiriiska ku jiro.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed ciise Cawad oo ku sugan dalka Masar ayaa sheegay in shirkaasi looga hadli doono xoojinta iskaashiga u dhexeeya dalalka Carabta iyo Yurub, xallinta caqabadaha waddamada caalamka horyaalla sida tahriibka iyo Amniga, iyo sidii wax looga qaban lahaa xasilooni darrada ka jirta qaar kamid ah dalalka Carabta.
Wadamada Midowga Yurub ayaa xilligaan waxa ay doonayaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan Wadamada Carabta oo qaarkood ay qani ku yihiin Shidaalka iyo Saliida,waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah wadamada Yurub ay martigeliyaan Qaxooti Carbeed oo wadamadooda dagaalo uga cararay.
Previous articleAamusnaanta Kenya ee khilaafka diblomaasiyadeed maxay ka dhigan tahay?
Next articleMaraykanka oo Sacuudiga u magacaabay danjire cusub